मोटरहेड टेक्केन आर २५० बाइक नेपालमा: कति पर्छ मूल्य ? यस्तो छ फिचर - Arthatantra.com
मोटरहेड टेक्केन आर २५० बाइक नेपालमा: कति पर्छ मूल्य ? यस्तो छ फिचर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मोटरहेड टेक्केन आर २५० मोटरसाइकल भित्रिएको छ ।
नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एसएलआर टेक्नो एण्ड ट्रेड प्रालिले उक्त मोटरसाइकल ल्याएको हो ।
कम्पनीका अनुसार मोटरहेड बाइक नेपालका सबै भू–भागका लागि उपयुक्त मानिएको छ । जसको मूल्य ४ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्दछ । यो मूल्य पनि सिमित समयका लागि रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो मोटरसाइकलमा फराकिलो र ठूलो टायर छ । यसका साथै उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, पिकअप पावर र आरामदायी रहेको दाबी कम्पनीको छ । यो २२३ सीसी क्षमताको इन्जिन जडित मोटरसाइकल हो । यसले अधिकतम १२.५ किलोवाट पावर टोर्क १७ एनएम दिने बिक्रेता कम्पनीले जनाएको छ ।
एलएलआर टेक्नो एण्ड ट्रेडले मोटरहेड व्रान्ड ५ वर्षदेखि नेपालको दुईपाँग्रे बजारमा डर्ट सेगमेन्टको रुपमा परिचित गराएको छ । यसका साथै कम्पनीले क्रसओभर र स्क्रयाम्बलर सेगमेन्टहरुलाई पनि नेपालमा लोकप्रिय बनाउन सफल भएको छ ।
कम्पनीले सात फरक मोडलमा अपग्रेड गरिएका मोटरहेड एमएच १५० आर, डर्ट बाइक, एमएच २०० ड्युल प्रपोज, टेक्केन २२३ सिसी मोडल, स्पोर्टस् अफरोड डर्ट, स्पोर्टस् अनरोड, एक्स टर्क र स्क्र्याबलर २५० सिसी बाइक बिक्री गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले बिक्री गरिरहेका स्क्र्याम्बलरको २५० को मूल्य २ लाख ९५ हजारदेखि ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
मोटरहेडको हाल देशका प्रभुख सहरहरुमा थ्रीएस सुविधा (बिक्री, सेवा र स्पेयर) सहित १४ वटा डिलर आउटलेट छन् ।
वि.सं.२०७८ असोज ३ आइतवार १२:४७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे मेगा बैंककी डेपुटी सिइओ रविना देशराज श्रेष्ठलाई सरकारबाट विभुषण
पछिल्लाे छुट्ला है ज्योति विकास बैंक र प्रभु इन्स्योरेन्सको ३५ हजार कित्ता सेयर, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?